လေယာဉ်ကော်ဇောလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - ရွှေလေဆာရောင်ခြည်
ကော်ဇော, ဖျာ & ကော်ဇောဖြတ်တောက်ခြင်း
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ။ : CJG-2101100LD
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကော်ဇောဖြတ်တောက်ခြင်းသည်နောက်ထပ်ကြီးမားသော CO2 လေဆာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ဒြပ်ကော်ဇောသည်အနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လေဆာရောင်ခြည်မှထုတ်လုပ်သောအပူသည်အစွန်အဖျားကျသည်။ မော်တော်ကားနည်းပြများ၊ လေယာဉ်များနှင့်အခြားသေးငယ်သောစတုရန်းပေရိုက်ချက်များအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကော်ဇောတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိယာကျယ်ဝန်းသည့်ပြားချပ်ချပ်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်တွင်ကော်ဇောကြိုတင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအကျိုးရှိစေသည်။
• အကြီးစား format နဲ့ CO2 flatbed လေဆာဖြတ်စက်နှင့်အတူ 11 မီတာပိုရှည်အလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာ.
• ဖုန်စုပ်စက်ကိုအလုပ်လုပ်နေသောစားပွဲ သည်အလိုအလျောက်အစာကျွေးသည့်စနစ်(optional) ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက် ကော်ဇောဖျာပစ္စည်းများ။
• ဤလေဆာဖြတ်တောက်စနစ်သည် ရှည်သောရှည်လျားသောအသိုက် နှင့်အပြည့်ပုံစံကိုဖြတ်နိုင်သည်။
• Smart nesting software သည် မြန်ဆန်စွာဖြတ်တောက်နိုင်သောဂရပ်ဖစ်များကိုပစ္စည်းချွေတာနိုင်မည်။
• 5''LCD display panel ။ အချက်အလက်ပို့လွှတ်မှုမျိုးစုံကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းမုဒ်များဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။
• Servo ထိပ်ရှိအိတ်ဇောစနစ်သည်လေဆာရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းအင်ကိုချွေတာသောထွက်ပေါက်စုတ်ယူခြင်းစနစ်နှင့်လေဆာခေါင်းကိုတစ်ပြေးညီဖြစ်စေနိုင်သည်။
• အနီရောင်အလင်းကိုနေရာချသည့်ကိရိယာနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ နို့တိုက်ကျွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပစ္စည်း၏အနေအထားသွေဖည်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။
• အသုံးပြုသူများကိုလည်း 1600mm × 3000mm (CJG-160300LD II ကို) ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံစံများကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ, 3000mm x ကို 4000mm (CJG-300400LD II ကို), 2500mm × 3000mm (CJG-250300LD), 1600mm × 8000mm (CJG-160800LD), 3400mm × 11000mm ( CJG-3401100LD) လုပ်ငန်းခွင်andရိယာများနှင့်အခြား ပြုပြင်ထားသည့်လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ.
CJG-2101100LD Laser Cutting Machine နည်းပညာ Parameter
CO2 RF သတ္တုလေဆာပြွန်
2100mm × 11000mm (82.7 ×× 433 in)
AI, BMP, PLT, DXF, DST စသဖြင့်
အိပ်ဇောပန်ကာ၊ လေမှုတ်စက်၊ GOLDENLASER အော့ဖ်လိုင်းဆော့ဝဲ
*** မှတ်ချက်။ ။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။ ***
GOLDEN LASER - CO2 ပြားပြားလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်
1600mm × 3000mm (63” × 118.1”)
2100mm × 3000mm (82.7” × 118.1”)
2100mm × 11000mm (82.7” × 433”)
3200mm × 8000mm (126” × 315”)
လေဆာဖြတ်တောက်ကော်ဇော applications များ
ရိုးရာကော်ဇော၊ နိုင်လွန်ကော်ဇော၊ သိုးမွှေးကော်ဇော၊ ပိုလီယိုပိုလီယန်ကော်ဇော၊ ယက်ထားသည့်ကော်ဇော၊ အ ၀ တ်စည်ကော်ဇော၊ အလှဆင်သည့်သိုးမွှေးနှင့်နိုင်လွန်ကော်ဇော၊ ဖြတ်ပုံကော်ဇော၊ polyester ကော်ဇော၊ ရောနှောထားသောကော်ဇော၊ သိုးမွှေးကော်ဇော၊ ရက်ကန်းမဟုတ်သောကော်ဇော၊ ဖျာ, etc
ယောဂဖျာ၊ စားသောက်ဆိုင်ကော်ဇော၊ living ည့်ခန်းကော်ဇော၊ စင်္ကြံကော်ဇော၊ ကြမ်းခင်းကော်ဇော၊ ရုံးကော်ဇော၊ လိုဂိုကော်ဇော၊ သိုးမွှေးဆေးရုံကော်ဇော၊ ဟိုတယ်ကော်ဇော၊ စားသောက်ခန်းမကော်ဇော၊ စီးပွားဖြစ်ကော်ဇော၊ , ကားဖျာ၊ လေယာဉ်ဖျာ၊ လေယာဉ်ကွင်း၊
<< Carpet Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းထွင်းထုခြင်းနမူနာများကိုဖတ်ပါ
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကော်ဇောဖြတ်တောက်ခြင်းသည်နောက်ထပ်ကြီးမားသော CO2 လေဆာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ဒြပ်ကော်ဇောသည်အနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လေဆာရောင်ခြည်မှထုတ်လုပ်သောအပူသည်အစွန်အဖျားကျသည်။ မော်တော်ကားနည်းပြများ၊ လေယာဉ်များနှင့်အခြားသေးငယ်သောစတုရန်းပေရိုက်ချက်များအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကော်ဇောတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိယာကျယ်ဝန်းသည့်ပြားချပ်ချပ်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်တွင်ကော်ဇောကြိုတင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအကျိုးရှိစေသည်။ CAD ဖိုင်ကိုကြမ်းပြင်၏အစီအစဉ်တွင် အသုံးပြု၍ လေဆာဖြတ်စက်သည်နံရံများ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်ဗီဒိုယာများ၏အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်သည် - လိုအပ်ပါကစားပွဲထောင့်တိုင်များနှင့်ထိုင်ခုံတပ်ဆင်ထားသည့်သံလမ်းများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။
ပထမပုံတွင်အလယ်ပိုင်း၌ trepanned support post cutout ပါသောကော်ဇောအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပြသည်။ ကော်ဇောအမျှင်များကိုလေဆာဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည် - ကော်ဇောအားနည်းစနစ်ပိုင်းဖြတ်တောက်သည့်အခါဘုံပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒုတိယပုံသည် cutout အပိုင်း၏သန့်ရှင်းစွာဖြတ်ထားသောအစွန်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒီကော်ဇောထဲမှာအမျှင်များရောနှောမှုသည်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းလက္ခဏာများမပြပါ
အဆိုပါ ကော်ဇောလေဆာဖြတ်စက် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံနှင့်အားလုံးကော်ဇောပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလျှော့ချနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခြင်းတို့သည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုတိုးတက်စေပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
မော်ဒယ်အမှတ်။ : CJGV-180100LD
မော်ဒယ်အမှတ်။ : JMCCJG-260400LD
Car Mat အတွက်လေဆာဖြတ်စက်
စက္ကူပလပ်စတစ်ပြားများပါ ၀ င်သည့် Galvo လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်